ब’ढी मूल्य पर्ने का’जुका फाइदा पनि मूल्यवा’न नै छन्
सफल हुनका लागि प्रेरणादायक १० भनाइहरु
का’जुको स्वाद मिठो हुन्छ त्यसैले बच्चादेखि बुढासम्मले का’जु खान रुचाउँछन् । का’जु स्वा’स्थ्यको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: का’जुको स्वाद मिठो हुन्छ त्यसैले बच्चादेखि बुढासम्मले का’जु खान रुचाउँछन् । का’जु स्वा’स्थ्यको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ । बढी मूल्य पर्ने का’जुका फाइदा पनि मूल्यवान नै छन् । का’जुलाई ड्राइफुडको राजा भनिन्छ । यो एक प्रकारको म’सला हो । काजु खानमा जति स्वादिलो हुन्छ, यो स्वा’स्थ्यका लागि पनि त्यतिकै लाभदायक हुन्छ । काजुमा मैग्निसियम, कपर, आयरन, पोटासियम लगायतका तत्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ । यी तत्वले हाम्रो श’रीरलाई स्व’स्थ राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले, हरेक दिन काजुको सेवन स्वा’स्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ ।
का’जु खानुका केही फाइदा यस्ता छन्:
१. थकान हटाउँछ: का’जुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ । केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले तपाईंको श’रीरमा ऊर्जा थपिनगई फुर्ती आउँछ ।
२. अनुहार चम्किलो बनाउँछ: काजुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । त्यही भएर काजु खाने गर्नाले अ’नुहार चम्किलो बन्छ । काजुलाई पानीमा भिजाएर पिस्ने र यसरी बन्ने लेपले अ’नुहारमा मसाज गर्नाले अ’नुहार अझ बढी चम्किलो हुन्छ ।
३. दि’माग तेजिलो बनाउँछ: काजुमा एकप्रकारको तेल पाइन्छ, जसमा भिटामिन–बी प्रचुर मात्रामा हुन्छ । यसले दि’माग तेजिलो बनाउँछ ।
४. युरि’क ए’सिड हुन दिँदैन: काजु खानाले शरीरमा यु’रिक एसि’ड फर्मेसन हुँदैन । यु’रिक एसि’डको समस्या भएकालाई ड्राइफुड उपयुक्त मानिँदैन । तर, त्यस्ता मानिसले पनि निर्धक्कसँग काजु खान सक्छन् ।
५. र’क्तचाप नियन्त्रण गर्छ: काजुमा सोडियमको मात्रा कम हुन्छ र पो’टासियमको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसैले काजु खाने गर्नाले र’क्तचाप नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ ।
६. को’लेस्टेरोल घटाउँछ: हरेक बिहान काजु खाने गर्नाले को’लेस्टेरोलको मात्रा नियन्त्रित रहन्छ ।
७. मु’टु बलियो बनाउँछ: का’जुमा पाइने ओलिक ए’सिडले मु’टुलाई स्व’स्थ र बलियो राख्छ । यसका अतिरिक्त काजुमा पाइने विभिनन तत्वले मु’टुका मां’सपेशीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छन् ।
८. डा’यबेटिज नियन्त्रण गर्छ: काजु खानाले श’रीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढ्छ र डा’यबेटिज नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ ।
९. पोषण प्रदान गर्छ: का’जुमा का’र्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, आइरन, जिंक, म्याग्नेसियम, कपर आदि पाइन्छन् । यिनले ह’ड्डी, दाँ’त आदिलाइ बलियो बनाउनुका साथै शरीरका सबै प्र’णालीलाई चुस्त राख्छन् ।
कति खाने का’र्बाेहाइड्रेट स्व’स्थ्य रहन ?
कुनै पनि व्यक्ति स्व’स्थ हुनका लागि आफ्नो उचाईअनुसार तौल, पे’टको गोलाई, श’रीरमा बो’सोको अनुपात मिलाउनुपर्ने पोषणविद् शाक्यको सुझाव छ । आधारभूत शा’रीरिक सूचकांक अनुसार पुरुषको पे’टको गोलाई ९० सेन्टिमिटर (सेमि) र महिलाको ८० सेमिभन्दा कम हुनु पर्छ । तौल उचाइको अनुपातमा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा बढी तौल भएको मानिन्छ । तौल बढी छ भने दैनिक तीन किलोमिटर छिटो–छिटो हिँड्ने, पौडी खेल्नेजस्ता व्या’याम गरेमा पनि तौल सन्तुलन राख्न सकिने पोषणविद् नानीशोभा शाक्यको सुझाव छ ।
नेपालमा का’र्बाेहाइड्रेटको बढी सेवनकै कारण मानिसको स्वा’स्थ्यमा असर देखिएको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालले खानाको प्रदर्शनी गर्दै आएको छ । गत महिना अस्पतालमै गरेको प्रदर्शनीमा सहभागीको स्वा’स्थ्य परीक्षण गर्दा ९० प्रतिशत सहभागीमा उचाइअनुसार बढी तौल भएको पाइएको थियो । प्रदर्शनीमा ६ सय जना सहभागी भएका थिए ।
आफ्नो नियमित खानामा तपाईंले का’र्बाेहाइड्रेटयुक्त खाना कतिको समावेश गर्ने गर्नुभएको छ ? अर्थात् खानामा चामल, मैदा, पीठो, आलु, फापर, कोदो, मकैजस्ता खानेकुरा आवश्यकभन्दा बढी खाइरहनु भएको त छैन ? यदि खाइरहनु भएको छ भने स्वा’स्थ्यमा अ’सर पुर्याउला, होस् गर्नुहोस् !
नेपालमा खा’नामा भात, रोटी, आलु स’खरखण्डजस्ता का’र्बाेहाइड्रेटयुक्त खाना खाने चलनकै कारण गम्भिर रो’गहरू बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन् । यही कारण पे’टको गोलाई बढ्ने, म’धुमेह हुने, श’रीरमा तौल बढ्नेजस्ता रो’गहरू बढिरहेको महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी इन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा. ज्योति भट्टराई बताउँछिन् । पहिलाका मानिसले यस्ता खाना खाने गरेका भए पनि शा’रीरीक श्रम गर्ने गरेका कारण उनीहरूमा कुनै स्वा’स्थ्य स’मस्या आउँथेन । तर अहिलेका मानिसमा शा’रीरिक परिश्रम गर्ने बानी कम भएकाले विभिन्न रो’ग लाग्ने गरेको भट्टराईको भनाइ छ ।
‘पहिला खाएको शक्तिभन्दा बढी हिँडेरै खर्च हुन्थ्यो, अहिले शा’रीरीक कामै कम छ,’ डा.भट्टराईले भनिन् । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको आठ प्रतिशतलाई म’धुमेह रोग लाग्छ ।
विश्व स्वा’स्थ्य संगठनले समेत मो’टोपनालाई रो’गका रूपमा समावेश गरेको छ । सन् २०१६ मा इन्डोक्राइनोली एसोसिएसन अमेरिकाले नियमित खानामा का’र्बोहाइडेटको मात्रा बढी भएको भन्दै ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस क्रममा सहभागीको मो’टोपना, तौल, पे’टको गोलाइको जाँच पनि गरिएको थियो । ‘नेपालीको खानामा का’र्बोहाइडेट बढी खाने बानी भएकैले प्रदर्शनीमार्फत जनचेतना जगाउन खोजेका हौं,’ पोषणविद् नानीशोभा शाक्यले भनिन् ‘धेरैमा तौल बढी पाइयो, कतिपयको पे’टको गोलाइ बढी पाइयो, यसो हुनु भनेको विभिन्न रो’ग लाग्ने जोखिम अवस्था हो ।’अ’स्पताल आउने म’धुमेहका बि’रामीले समेत भातको मात्रा कम गर्ने सुझाव अस्वीकार गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘रोटी, भात, आलु कम खानु भन्यो भने अस्वीकार गर्छन्,’ उनले भनिन् ।
पो’षणविद्का अनुसार चामल, कोदो, गहुँ, फापर, आलु, पिंडालु, स’खरखण्ड लगायतबाट बनेका खानेकुरामा का’र्बोहाइडेट बढी हुन्छ । बजारमा पाइने चाउचाउजस्ता तयारी खानेकुराहरूमा पनि का’र्बोहाइडेटकै मात्रा बढी हुन्छ । यस्ता खानेकुरा दैनिक खानामा बढी समावेश गर्ने गरेकाले नै नेपाली गम्भीर रोगको जोखिममा छन् ।
चिकित्सकका अनुसार शरीरमा का’र्बोहाइडेटको मात्रा बढी भयो भने र’गतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी जम्मा हुन्छ र त्यो खर्च नभएपछि बो’सो बन्छ । यही बो’सो पे’टमा जम्मा भएपछि पे’टको गोलाइ बढ्छ । त्यहाँ पनि बढी भएपछि श’रीरका अन्य अंगमा पुगेर असर गर्छ । म’धुमेह भएका बि’रामीमा ग्लुकोजको मात्रा बढी हुन्छ र पछि गएर आँ’खा, मि’र्गौला र खु’ट्टामा समेत असर पुर्याउँछ,’ डा.भट्टराईले भनिन् । कोर्बोहाइडेट बढी भएपछि मोटोपनासँगै उच्चर’क्तचाप, मु’टुरो’ग, दोस्रो प्रकारको म’धुमेह, क्या”न्सर, ह’ड्डी, श्वा’सप्रश्वाससम्बन्धी रो’ग लाग्छन् । पछि गएर डि’प्रेसनजस्ता गम्भीर मा’नसिक रो’गसमेत लाग्छन् ।
बढी तौल या मो’टोपनाबाट बच्न सन्तुलित भोजनमा जोड दिनुपर्ने पोषणविद् बताउँछन् । त्यसका लागि आफ्नो उचाई, तौल र दैनिक गर्ने शारीरिक श्रमअनुसार खानाका तत्वहरू समावेश गर्नुपर्छ । दैनिक खानामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म प्रोटिन, ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कार्बोहाइडेट, २० देखि ३० प्रतिशतसम्म चिल्लो पदार्थ र बाँकी भिटामिन समावेश गर्नु पर्छ । यसअघि नेपाल तथा भारतमा दैनिक खानामा ७० प्रतिशत का’र्बोहाइडेट समावेश गर्नुपर्ने पोषण सूत्र रहे पनि पछिल्लो समय परिवर्तन हुनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । ‘कुनै आधिकारिक निर्देशन आएपछि का’र्बोहाइडेटको मात्रा ४० भन्दा कम गर्नु पर्छ,’ डा.भट्टराईले भनिन् ।
पोषणविद शाक्यका अनुसार दैनिक चारैपटक खाइने खानामा यी तत्वका मात्रा मिलाएर खानु पर्छ । माछा, अन्डा, मासु, दूध, दही, गे’डागुडी, पनिर लगायतका खाने कुरामा प्रोटिन बढी हुन्छ । चामल, पीठो, भात, रोटी, ढिंडो, पिंडालु, तरुल, आलु चाउचाउ, मःमः, कोक, चिनी, बि’यर, र’क्सीजस्ता कुरामा का’र्बोहाइडेट बढी हुन्छ ।
बदाम, काजु, तोरी, भटमास र सूर्यमुखी फूलको तेल, वनस्पती घिउमा चिल्लो पदार्थ बढी हुन्छ । यसैगरी फलफूल र तरकारीमा भिटामिनको मात्रा बढी पाइन्छ । कतिपयलाई आफ्नो उचाई र तौलअनुसार कति खानु पर्छ भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । यसैकारण उनीहरूले आफ्नो स्वा’स्थ्य परीक्षण गराइ पोषणविद्को सल्लाहअनुसार खानाको मात्रा मिलाउनु उचित हुन्छ । शरीरमा का’र्बोहाइडेटको मात्रा घटाउन खानामा माछा, मा’सु तथा फलफूल,तरकारीको मात्रा बढाउन सकिन्छ ।
राशिफल32 mins ago
कोरोना भाइरस16 hours ago
मनोरञ्जन17 hours ago
खेलकुद19 hours ago